Orinasa indostrialy mivezivezy rafitra fitrandrahana ultrasonikaly - Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra fividianana ultrasonikaly any Sina
20Khz homogenizer fanaparitahana fitaovana ultrano nano
Ny fitrandrahana ultrasonic dia mifototra amin'ny fitsipiky ny rongony akustika. Ny fandentehana ny famotopotorana ultrasonic ao anaty ala-bozaka ahitra na ny vahaolana mifangaro amin'ny fakany, ny taho, ny ravina, ny voninkazo ary ny solvents maintso dia mety hiteraka hery mahery vaika sy volo. Aringano ny sela zavamaniry ary afaho ireo akora ao anatiny. JH dia manome tsipika fitrandrahana ultrasonic indostrialy misy mizana sy endrika samihafa. Ireto misy masontsivana amin'ny fitaovana kely sy salantsalany. Raha mila sca lehibe kokoa ianao ...
Ny fampiharana ny fitaovana fanodinana ranoka ultrasonic dia misy ny fampifangaroana, fanaparitahana, fihenan'ny haben'ny sombiny, fitrandrahana ary fanehoan-kevitra simika. Manome ampahana indostrialy isan-karazany izahay, toy ny akora nano, loko sy loko, sakafo sy zava-pisotro, kosmetika, akora simika ary solika.
Fitaovana sonochemistry ultrasonic ho an'ny fanodinana ranoka
Sonochemistry ultrasonic dia fampiharana ny ultrasound amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fizotran'ny simika. Ny mekanika miteraka vokadratsin'ny sonochemical amin'ny ranoka dia ny fisehoan'ny cavitation akustika. Ny cavitation akustika dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany toy ny fanaparitahana, fitrandrahana, emulsification ary homogenization. Amin'ny lafiny famoahana dia manana fitaovana samihafa izahay hihaonana amin'ny famaritana ny famaritana isan-karazany: manomboka amin'ny 100ml ka hatramin'ny zato taonina ny tsipika famokarana indostrialy isaky ny andiany. SPECIF ...